Maalinta: Sebtember 24, 2019
Nidaamka mudaaharaadka ee Madaarka Atatürk, oo ku wareejiyay dhammaan howlaha rakaabkii garoonka diyaaradaha Istanbul illaa iyo bishii Abriil, wuxuu ka bilaabmayaa qandaraaska Hay'adda Duulimaadyada ee Gobolka (DHMİ). Çelebi, Havaş iyo Sistem oo xamuulka dhinaca garoonka diyaaradaha Atatürk [More ...]
Diiwaanka Todobaadka ee Toddobaadka Yenikapı Atatürk Subway
Metro Istanbul, oo sidata in kabadan 2 milyan oo rakaab ah maalin walba, 21 Sebtember 2019 waxay jabisay rikoorkii rakaabka ee M1 Yenikapı-Atatürk Airport / Kirazlı metro line Sabtidii. Booska iyo teknolojiyadda garoonka diyaaradaha Atatürk [More ...]
Karabük Iron iyo steel Works Inc. (KARDEMİR) wuxuu si guul leh u soo saaray 4140 (42CrMo4) xirmooyin bir oo tayo sare leh oo badanaa lagu isticmaalo warshadaha gawaarida iyo difaaca. KARDEMİR, shirkadda dhexdeeda ee warshadaha gawaarida iyo difaaca [More ...]
Nidaamyada Codsi ee Ganacsi ee Ganacsiga ayaa laga bilaabay Degmooyinka Muğla
Degmooyinka Magaalada Muğla oo leh qaanuun cusub, hay Shahaadooyinka Ruqsadda Shaqada iyo Dariiqooyinka iyo Shahaadooyinka loo hoggaansamo "si loo helo milkiilaha taarikada badeecadda iyo ganacsatada si looga fogaado waqti iyo khasaaro maaliyadeed. [More ...]
Farriin macno leh oo dunida looga soo diro Fanaaniinta Haweenka ee Fankulaha
Kooxo haween ah ayaa isugu yimid Izmir iyada oo loo marinayo warbaahinta bulshada markii ugu horeysay 2013 si kor loogu qaado isticmaalka baaskiilka si loo hubiyo gaadiid waarta ee magaalooyinka. [More ...]
Xarunta Baaskiilka Baaskiilka ee Kayseri
Kayseri 20-21-22 Sebtembar 11 Grand Prix Erciyes iyo Dalxiiska Kayseri wadooyinka baaskiillada caalamiga ah ayaa tartamayaasha 100 ee waddanka ka socda waxay ahayd goobta halganka. Baaskiil caalami ah oo loogu tala galay xeryaha tababbarka sare [More ...]
Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Yurub wuxuu ahaa Hail magaalada Konya
Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa ee Yurub, oo sidoo kale loogu dabbaaldegay Konya oo leh in kabadan kun kun oo magaalo oo Yurub ah 2, ayaa ku dhammaaday "Maalinta Dhacdada Gawaarida ee aan loo qabanin ee ku xigta garoonka Konya ee Magaalada Caasimadda ah. Dhaqdhaqaaqyada ka bilaabma isboortiga Mehteran ee subaxa hore [More ...]
Basaska Dadweynaha ee Kocaeli Pes Dedirtti
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii waddaa kormeerkeeda basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay. Macnaha guud, si loo sameeyo socdaal nabdoon oo muwaadiniintii lagu qabtay qalabkii kormeerka ee Gebze ayaa ka tanaasulay. XUQUUQDA BASES EE LA RIDAY Degmada Kocaeli Magaalo Weyn [More ...]
Noramgic Tramway oo ku taal Istanbul Street inuu noqdo Baaskiil Waddo
Duqa Magaalada Düzce Faruk Özlü wuxuu baaray codsiyada muunadda ee dhismaha goobta ku baahsan mashruuca loo diyaariyay “İstanbul Street qeybta kaasoo ah wadnaha Düzce. Madaxweyne Özlü, Istanbul Street waxaa loo diyaarin doonaa inuu la kulmo himilooyinka muwaadiniinta oo dhan, ayuu yiri. [More ...]
İmamoğlu: Waxaan rabaa inaan kala hadlo Channel İstanbul oo aan la qaato Erdogan
Imamoglu: Waxaan jeclaan lahaa inaan kala hadlo Channel Channel Istanbul Erdogan: Madaxweynaha IMM-da Ekrem Imamoglu, dalabka Erdogan ee ballanta ayaa wali ansax ah, Erdogan wuxuu sheegay inuu doonayo inuu kala hadlo Channel Istanbul. Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, [More ...]
Gaadiidka TCDD ayaa beeniyay Wararka Is-miidaaminta ee ka dhacay Marmaray
Gaadiidka TCDD Co. War-saxaafadeed qoraal ah, wuxuu ku dhawaaqay in sawirradiisa lagu baahiyay mareegaha qaar iyo warbaahinta bulshada ee cinwaanka Is-dilitaanka ee Marmaray aysan ka turjumaynin xaqiiqada. Gaadiidka TCDD Co. qoraal qoraal ah oo la sameeyay sida soo socota; [More ...]
Tababar Dalxiis oo loogu talagalay Darawallada Taksiyada Canshuuraha ee Magaalada Istanbul
'Barnaamijka Tababbarka Takhaatiirta Dalxiiska ee Duullimaadka Istaanbuul', oo ay ka qeybgali doonaan darawalada taksilada 1550, aqoonyahanno, qoraayaal, farshaxanno iyo khubaro ku xeel dheer garoonka, ayaa waxaa bixin doona 45 waxayna socon doontaa illaa 4 Oktoobar. Tababbarka si guul leh [More ...]
Socdaalka Taariikhda ee Istanbul 'Noramgic Tram'
Istanbul waa magaalo ay ku soo rogtay qaabkii gaadiidku maalinba maalinta ka dambaysa iyada oo degsiimadiisu dejisay taariikhdeeda oo dhan. Magaalo gudaha ah oo ka soo fida carshiga ilaa gawaarida gawaarida, taraamyada, basaska trolley iyo ilaa gawaarida maanta, kuwa dhulka hoostiisa mara, basaska, basaska. [More ...]
Saacadaha Shaqada Gawaarida Denizli Cable waa la beddelay
Denizli Teleferik iyo Bağbaşı Plateau, oo ka mid ah meelaha dadku ku badan yihiin ee Denizli, waxay bilaabeen inay codsadaan xilliga qaboobaha. Sida jawigu si tartiib tartiib ah ugu qaboobo Denizli, Teleferik iyo Bağbaşı plateau [More ...]